आज साउन २३ गते शनिबार, कस्तो रहला तपाईको दिन ? हेर्नुहोस् दैनिक राशिफल ! - Onlines Time
August 7, 2021 onlinestimeLeaveaComment on आज साउन २३ गते शनिबार, कस्तो रहला तपाईको दिन ? हेर्नुहोस् दैनिक राशिफल !
भावुकताको कारण बोलि तथा व्यवहारमा ठेस पुग्न सक्छ । स्वास्थ्यमा समस्या आउनेछ । मान सम्मानमा चोट पुग्न सक्छ । आमाको सवास्थ्यको कारण मनषिक तनाब बढ्न सक्छ । बिद्यार्थीहरुको लागी समय मध्यम रहेको छ। स्त्री मित्र र पनिबाट टाढा रहनु होला ।
चिन्ता मुक्त्त भइने छ । साहित्य तथा लेखन कार्यमा सहभागी भइने छ । साहित्य तथा कला क्षेत्रमा योग दान रहने छ । परिवारका सदस्यहरु विशेष गरी आमा संग आत्मीयता बढ्नेछ। छोटो यात्राको योग रहेको छ । आर्थिक मामिलामा ध्यान केन्द्रित हुनेछ।
सोचेको काम पुरा हुदा मन प्रसन्न हुनेछ । आर्थिक योजनाको कारण विभिन्न समस्य कम हुनेछ । नोकरी व्यवसायमा आफ्ना सहकर्मीहरुको सहयोग पाउनुहुनेछ । साथी भाइ तथा प्रियजन संगको भेटले मन प्रसन्न हुनेछ । परिवारमा सुख र शान्ति को वातावरण रहनेछ।
साथीहरु, परिवार र परिवारका सदस्य संग धेरै राम्रो दिन हुनेछ। उपहार प्राप्त हुदा मन प्रसन्न हुनेछ । रमाइलो यात्रा हुनुको साथै उत्तम भोजन हुनेछ । शुभ समाचार मिल्ने छ । आर्थिक लाभ हुनेछ । श्रीमती संग राम्रो समय बित्नेछ। शारीरिक र मानसिक रूपमा खुशी अनुभव गर्नुहु
अदालत मामिलाहरु बाट टाढा रहनहोला । मानसिक तनाब बढ्नुको साथै विभिन्न चिन्ताले सताउने छ । शारीरिक स्वास्थ्यमा समस्या आउनसक्छ । बोली र व्यवहारमा संयम राख्नुहोला अन्यथा विवादमा पर्न सकिन्छ । खर्च बढनेछ। स्त्री जातिबाट सचेत रहनु होला ।
लाभदायक दिन रहेको छ । बुजुर्गहरु र साथीहरु संग दिन रमाइलोमा बित्नेछ । रमाइलो यात्रा हुनेछ । श्रीमती र सन्तान संग राम्रो समय बित्नेछ। दाम्पत्य जीवनमा खुशी छाउने छ । टाढा रहेका सन्तानको खबर प्राप्त हुनेछ । प्रियजन संग भेट्ने सम्भावना छ।
कार्यस्थलमा राम्रो वातावरणको कारण मन खुशी हुनेछ । स्वास्थ्यमा सुधार हुनेछ । नोकरीमा पदोन्नतिको योग बनेको छ । कार्य क्षेत्रमा उच्चपधाधिकारीले तपाईको कामको प्रसंशा गर्नेछन् । परिवारमा सुखको वातावरण रहनेछ। आमाको पक्षबाट लाभ प्राप्त हुनेछ। सरकारी काममा सफलता मिल्नेछ।
शारीरिक तथा मनषिक रुपाम थकान महसुस हुनेछ । जसको कारण उत्साह कम हुनेछ । व्यवसाहिक क्षेत्रमा मन्धि छाउने छ । उच्च अधिकारीहरुको व्यवहारले मन खिन्न हुनेछ । सन्तान संग पनि मतभेद हुन सक्छ। नयाँ कामको थालनी नगर्नु उचित हुनेछ ।
दैनिक कार्य बाहेक दिन भेट घाट र रमाइलोमा बित्नेछ। स्वादिष्ट भोजन हुनुको साथै साथिहरु संग रमाइलो यात्रा हुनेछ । विपरित लिंगका साथिहरु संग रमाइलो समय बित्नेछ । व्यापारमा वृद्धि हुनेछ । सहभागी भएको स्थानबाट लाभ हुनेछ । सामाजिक मान-सम्मान बढ्ने छ ।
काममा सफलता प्राप्त गर्ने समय रहेको छ । तपाइले गर्नु भएको कामबाट मान सम्मान बढ्ने छ । परिवारमा सौहार्दपूर्ण वातावरण रहनेछ। शारीरिक तथा मानशिक रुपमा स्वस्थ अनुभव गर्नु हुनेछ । आमा तथा परिवारबाट शुभ समाचार मिल्ने छ । खर्च बढ्ने छ । बिरामी व्यक्तिको स्वास्थ्यमा सुधार हुनेछ ।
August 20, 2021 puspa